Umzekelo wokuTshintshiselwa kwabantu
Imodeli yokuguquguquka kwabantu ifuna ukucacisa ukuguqulwa kwamanye amazwe ukuba abe namazinga aphezulu okuzalwa nokufa kwizinga eliphantsi lokuzalwa nokufa. Kwamazwe athuthukile, lo tshintsho lwaqala ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo kwaye luqhubeka namhlanje. Amazwe angaphantsi kwamandulo aqala utshintsho kamva kwaye aphakathi kwezigaba zangaphambili zomzekelo.
Imodeli isekelwe kwinguqu kwizinga elingenanto lokuzalwa (i-CBR) kunye nesantya sokungafi (CDR) ngaphezulu kwexesha.
Ngamnye kuboniswa ngabemi abayiwaka. I-CBR imiselwa ngokuthatha inani lokuzalwa ngonyaka omnye kwilizwe, lihlula liqela labantu, kwaye liphindaphinda inani ngo-1000. Ngo-1998, ii-CBR e-United States zi-14 ngonyaka we-1000 (abantu abazalwa ku-14 ngabantu abayi-1000 ) ngelixa i-Kenya ineminyaka engama-32 ngonyaka we-1000. Inani lokufa ngonyaka omnye lihlulwe ngabemi kwaye loo manani yanda ngo-1000. Oku kuvelisa i-CDR ye-9 e-US kunye ne-14 eKenya.
Ngaphambi kokuguqulwa kweZoshishino, amazwe aseNtshona Yurophu abe neCBR ephezulu kunye neCDR. Ukuzalwa kwakuphezulu kuba abantwana abaninzi babethetha abasebenzi abaninzi kwifama kunye nezinga eliphezulu lokufa, iintsapho zifuna abantwana abaninzi ukuqinisekisa ukuhlala kwintsapho. Amazinga okufa aphezulu ngenxa yezifo kunye nokungabikho kococeko. I-CBR ephezulu kunye ne-CDR zazizinzile kwaye zithetha ukukhula kancinci kwabantu.
Izifo zengculaza ziza kukwandisa kakhulu i-CDR iminyaka embalwa (emele "amagagasi" kwiSigaba I somzekelo.
Ngekhulu le-18 leminyaka, izinga lokufa emazweni aseNtshona Koloni lihla ngenxa yokuphucula ukucoceka kunye namayeza. Ngenxa yesithethe kunye nokusebenza, izinga lokuzalwa lahlala liphezulu.
Oku kunciphisa izinga lokufa kodwa izinga lokuzalwa elizinzile ekuqaleni kweSigaba II lunegalelo ekukhuphukeni kwamazinga okukhula kwabantu. Ngokuhamba kwexesha, abantwana baba yindleko eyongeziweyo kwaye babengenako ukufaka isandla kwiintsi zentsapho. Ngenxa yesi sizathu, kunye nentuthuko yokulawulwa kokuzalwa, i-CBR yancitshiswa ngekhulu lama-20 kumazwe athuthukile. Abantu basakhula ngokukhawuleza kodwa oku kukhula kwaqala ukunyuka.
Amazwe amaninzi amaninzi athuthukile okwangoku kwiSigaba II somzekelo. Ngokomzekelo, i-CBR ephezulu ye-32 ye-1000 ngonyaka ka-1000 kodwa i-CDR engama-14 ye-1000 ngonyaka i-1000 ibe negalelo ekukhuleni okuphezulu (njengoko kuphakathi kweSigaba II).
Ngasekupheleni kwekhulu lama-20, i-CBR kunye ne-CDR kumazwe athuthukisiwe avuliwe kwizinga eliphantsi. Kwezinye iimeko, i-CBR iphezulu ngaphezu kweCDR (njengase-US 14 kuya kwe-9) ngelixa kwamanye amazwe i-CBR ingaphantsi kwe-CDR (njengaseJamani, 9 kuya kwe-11). (Unokufumana idatha yangoku yeCBR kunye neCDR kuwo onke amazwe kwi-International Data Base). Ukufuduka kwamanye amazwe kumazwe angaphantsi kwexesha ngoku kubangele ukwanda kwamanani kumazwe athuthukile aseSiteji III senguqu. Amazwe afana neChina, iSouth Korea, iSingapore kunye neCuba baya kusondela kwiSigaba III ngokukhawuleza.
Njengazo zonke iimodeli, imodeli yokuguquguquka kwabantu iinjongo zayo. Umzekelo awuboneleli "izikhokelo" malunga nokuba kuthatha ixesha elingakanani ilizwe ukuya kwiSigaba I ukuya ku-III. Amazwe aseNtshona Yurophu athatha amawaka ngamanye amazwe aphuculayo ngokukhawuleza njengamaTigon yoQoqosho abaguqula kwiminyaka emashumi nje kuphela. Lo mzekelo awucaciseli ukuba onke amazwe aya kufumana iSigaba III kwaye abe nokuzalwa okuzinzileyo kunye nokufa kwamazinga. Kukho izinto ezifana nenkolo egcina izinga lokuzalwa kwamanye amazwe ekuhlahleni.
Nangona le nguqu yenguqu yoluntu iqulethwe ngamanyathelo amathathu, uya kufumana imodeli efanayo kumathekisthi kunye nezo ziquka ezine okanye izigaba ezihlanu. Ubume begrafu luyafana kodwa amaqela ngexesha liphela ukuguqulwa.
Ukuqonda kwalo mzekelo, nakweyiphi na iifom zayo, kuya kukunceda ukuba uqondisise kangcono imigaqo-nkqubo yabemi kunye noshintsho kumazwe athuthukileyo nakancinci athuthukileyo emhlabeni jikelele.
Abantu baseMelika ngokusebenzisa iMbali
IiRhafu zokuKhula kwabemi
Kuphi ukuthengisa iindawo zakho
Iikholeji eziphezulu zeMidlalo yeZihlalo zobukhosi
Iimpawu ze-Geographic About New Delhi, India
Ubukhosi baseInca - ookumkani baseMzantsi Melika
Yintoni i-pH yesisu?
Isikhokelo kwiiNtsholongwane kunye neeNtsholongwane
Ezininzi (umdlalo wokuthuka)
Injongo kwiRhetoric kunye noBumbe
I-Circulatory System: Vula kunye Valiwe
I-Mulitplying Polynomials Izimpendulo Neenkcazo